China Umqolo kathathu Drilling Machine mveliso kunye nabenzi | Gladline
Inani lokuluka 21 * 3
Ubungakanani beemoto ezipheleleyo 4.5 kw
Umbane ofanelekileyo 380 v
Ukusetyenziswa kwegesi ukubhola iipaneli ezilishumi ngemizuzu emalunga nayo 20L / min Malunga
Ubukhulu. umgama weentloko ezimbini ezinde 1850 mm
Ukuphakama kweqonga lokusebenza emhlabeni Ngama-800 mm
Ngaphezulu kobungakanani 2600x2600x1600 mm
Ubungakanani bokupakisha 2700x1350x1650 mm
Ubunzima 1260 kg
Ukuze kuqinisekiswe ukubhola ukuchaneka kunye nomgangatho imveliso, ukubhola amacandelo ifanitshala ifanitshala ngokubanzi kwenziwa kunye nemiqolo ezininzi Drilling Machine. Isithuba sokuqhekeza kwisitringi semigca engama-32mm. Ngamazwe ambalwa kuphela asebenzisa ezinye izithuba zemodyuli yokugrumba, zihlala zihlala zihleli zilungile kumqolo wonke. Isihlalo sokuphonononga ngokuthe ngqo senziwe ngemigca emibini ezimeleyo yezihlalo. Inani lemiqolo yokugrumba izihlalo zemigca emininzi yemigca ngokubanzi isusela kwimiqolo emi-3 ukuya kwimiqolo eli-12 (izitulo zokombiwa ezongezelelekileyo zinokongezwa xa kukho iimfuno ezizodwa) zihlala zenziwe ngezihlalo zokugrumba ezithe tye kunye nezihlalo ezisezantsi zokuma ngokuthe nkqo. Ukuba kukho iimfuno ezizodwa okanye inani lemiqolo yezihlalo likhulu, izitulo zokuphaka nkqo ezinokuqwalaselwa okuphezulu nangaphantsi zinokusetyenziswa. Oku kufuneka kusekwe kwiimfuno zemveliso kunye nokuqhutywa kokuchaneka kweemfuno. Inani lezihlalo zemigca yokurola eqhelekileyo kwimveliso yimigca emi-3, imiqolo emi-6, njl.
1. Coca itafile yomatshini ngexesha emva kokuba ugqityiwe umsebenzi,
2. Coca iichips zeenkuni kuloliwe wesikhokelo nakwicala ukunqanda ukudibana komatshini ngenxa yokuphazamiseka kweetshipsi.
3. Rhoqo ucoce isikrufu esikhokelayo ukunqanda umba welizwe langaphandle ekubeni unamathele kwi-screw lead. Isikhonkwane esikhokelayo yeyona nto iphambili kwezixhobo, ichaphazela ukuchaneka komatshini, kwaye isikhonkwane esikhokelayo sidlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yokuhambisa.
4. Coca ibhokisi yolawulo lwamashishini rhoqo, uthuli ngoyena mbulali ubhola ukubhola.
5. Ukususa uthuli kunye nomsebenzi wokugcwalisa ioyile kufuneka wenziwe kumzila wokutyibilika womqolo weveki nganye.
Okulandelayo: China 3D 3axis / 4axis CNC Woodworking Router 1325 with for Furniture